Mmetụta Semalt Na-akwado CTA Buttons Ntuziaka
Mgbe ị na-arụ ọrụ e-azụmahịa, njikarịcha nke ọdịnaya weebụ maka ezigbonyocha ihuenyo bụ isi ihe. Ọtụtụ ụlọ ọrụ enweela ihe ịga nke ọma n'ịntanetị site na iji SEO na ndị ọzọ dijitalụ rụọ ọrụ nke ọmausoro ahia. Akụkụ ndị dị ka nhọrọ nchịkọta nhọrọ na nyocha njirimara dị mkpa n'ịchọpụta otu weebụ ga-esi akpa àgwàna SERPs. Mgbe emelite Google algorithm na January 2017, ihe ndị Google na-enye nnukwu oge ugbu a bụ afọ ojujumkpa, mmekọrịta enyi na enyi, na ahụmahụ onye ọrụ.
Na njirimara onye ọrụ, Max Bell, Onye Ọrụ Nchịkọta Ahịa nke Ọkachamara Ọrụ Ntanetị, na-atụ aro ihe ndị a:
Nlekọta weebụ nke na-enye aka n'anya onye ọrụ.
Ntugharị nke igodo (na isi echiche).
Ọdịnaya nke dị mkpa ma ọ bụ mkpa onye ọrụ
Dịka ihe ndị a si kwuo, ahụmahụ nke iji mkpokọta weebụ kwesịrị ịbụ isiechebara echiche mgbe ị na-emepe ọdịnaya weebụ. N'ihi ya, ọrụ CTA mepụtara nnukwu mkpa iji tụlee ebe ị ga-etinye bọtịnụ dị mkpa. Makadịka, bọtịnụ oku-eme. Mpịpị a na-eme ka onye ọbịa bịa rụọ ọrụ dị mkpa na ibe weebụ dị ka ịzụta, denye ahama ọ bụ ibudata. Ị nwere ike iji ndụmọdụ ndị dị n'okpuru iji mee ka CTA ntinye ego nwere ike ịbụ ọrụ dị mfe:
1. Ogige atụrụ ahụ
Ntinye nke CTA kwesiri irube isi na ibe nke ibe weebụ. UX kwesịrịnọgide na-enwe obi ụtọ dị ka o kwere mee na bọtịnụ CTA..Ụfọdụ atụmatụ nwere ike inye aka ịtọ bọtịnụ dị n'elu ụlọ atụrụ ahụ na ndị ọzọ nọ n'okpuru ya. Na ndị ọzọikpe, ibe weebụ dị ogologo gụnyere CTA na elu na ala nke ibe. Obe weebụ ibe weebụ nwere okechi ọnọdụ iji webe okubọtịnụ ihe.
2. Ụlọ ọrụ na Desktọpụ
Dị ka nkwalite nke January, Google ga-etinyekwu uche na yana mobilefriendliness nke a website. Mgbe ị na-eme SEO, enwere ụfọdụ atụmatụ atụmatụ ị na-etinye na ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụghịna desktọọpụ. Dịka ọmụmaatụ, ogologo oge. Dị ka nchọpụta, ọtụtụ ndị ọrụ ntanetịime họọrọ ala itinye CTA button. Naotu ọmụmụ, ndị mmadụ na-ahụ na ọ dị mfe ịrụ ọrụ CTA na ngwaọrụ mkpanaka karịsịa mgbe bọtịnụ CTA dị n'elu nke ibe.
3. N'aka ekpe ma ọ bụ n'akụkụ aka nri
N'ọtụtụ ọnọdụ (ọ bụrụ na ọ bụghị ya niile), bọtịnụ oku na-arụ ọrụ na-ejere ndị ahịamgbe ọ dị n'akụkụ aka nri nke ibe weebụ. Dị ka onye na-ahụ anya, onye ọrụ, na-ekwu na onye ahịa, ga-pịa otu peeji na njedebe ma ọ bụ n'elu aka nrinkuku. Ihe a na-eme ka ndị mmadụ na-eme mkpokọta weebụ. Smartphones nwere ọdịdị ala nke ịtọye menu na ekpe, nke na-enye oheremaka ntinye aka ntinye aka nri.
Mgbe ị na-eme e-azụmahịa, akụkụ pụrụ iche nke imewe weebụ SEO na bọtịnụntinye ego na-arụ ọrụ dị oke egwu. Ebe nrụọrụ weebụ kwesịrị ekwesị ga-enwe ike ịmegharị onye ọbịa n'ime onye zụrụ site na akụkụ ndị dị mkpa nke saịtị ahụ. Mgbe aonye nleta clicks njikọ gị, usoro AIDA (Ntị - Mmasị - Nchọ - Action). Usoro a kwesịrị iduzi gị site n'ebe ị nọtinye bọtịnụ ndị dị mkpa dịka bọtịnụ oku-iji-rụọ. Mkpọpu CTA nwere ike ịnwe ọnọdụ dị iche iche n'ime ibe weebụ gị. Ebe ndị agụnyere ebe dị n'ime ibe ma ọ bụ ebe kwesịrị ekwesị maka ndị na-agagharị agagharị. Otu interface nke na-adịghị agbatị ọsọ ọsọ nwere ike ime ka ị ghara ịba uruokporo ụzọ, na-emerụ mgbalị SEO gị. N'iji ntuziaka CTA ndị a, ntọghata gị nwere ike imewanyewanye Source .